FAQs - Suzhou Industrial Park Haiermei Knitting Garments Co., Ltd.
Mila vonjy? Aza hadino ny mitsidika ireo forum momba ny fanohananay raha te hahita valiny amin'ny fanontanianao ianao!
Azoko atao ve ny manafatra santionany iray hijerena ny kalitaony?
Eny, ilaina ary azo ekena ny lamina santionany.
Azonao atao ve ny mamorona ny vokatra amin'ny alàlan'ny volavolanay manokana na logo misy anay amin'ny vokatra?
Eny, azonao atao ny manamboatra ny volavolanao manokana, sary famantarana, marika amin'ny vokatra.
Raha kely dia kely ny haben'ny kaomandy, toa ny sombiny 50-100 isan-karazany isaky ny loko.haiky ve isika?
Eny, vitantsika izany, raha manana lamba fitehirizana ampy ho an'ny baikonao izahay.
Manana trano hanaovana pirinty sy fanaovana amboradara ve ianao?
Eny, izahay dia mila mandefa ny layout / zavakanto na ny hevitrao fotsiny izahay dia afaka mandanjalanja mifanaraka amin'izany izahay.
mandra-pahoviana ianao no hahazo ireo santionany aminay?
Ho an'ny mpanjifa vaovao, rehefa avy nandoa ny vidin'ny santionany ianao dia hahazo ny santionanay avy amin'ny 3 ka hatramin'ny 7 andro; ho an'ny mpanjifa mahazatra, aorian'ny famakiantsika ny torolalanao dia hahazo ny santionanay izahay hatramin'ny 3 ka hatramin'ny 7 andro
Inona ny fe-potoana fandefasana azonao atolotra? Ahoana ny amin'ny fotoana fitarihana betsaka?
Ho an'ny santionany sy ny kaomandy kely dia mitaky DHL / Fedex / UPS / EMS momba ny 3-7 andro fiasana. Ho an'ny be indrindra, ny fotoana itarihana dia mila 35-45 andro, ary ny baiko amin'ny alàlan'ny fandefasana ranomasina, matetika dia 15-30 andro vao tonga seranan-tsambon'ny mpanjifa.
Inona no karazana fe-potoana fandoavana matetika?
Ny fepetra faratampony amin'ny fandoavam-bola dia ny T / T. Mampiasa teny hafa koa izahay, saingy vitsy. Ho an'ny baiko lehibe, fametrahana 30% rehefa mametraka ny filaminana ianao, ny fandanjana 70% dia tokony aloa amin'ny kopian'ny B / L.